IMGBURN သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
ImgBurn အသုံးပြု Options ကို
ImgBurn - ယနေ့အထိလူကြိုက်အများဆုံးထဲကတစ်ခု, သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးမှတ်တမ်းတင်ဘို့ applications များ။ သို့သော်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပြင်, ဒီ software ကိုအခြားအသုံးဝင်သော features တွေများစွာရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်တှငျကြှနျုပျတို့ကိုသင် ImgBurn ၏အကူအညီနှင့်ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်နေသည်နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
ငါ ImgBurn အဘယ်အရာကိုသုံးနိုင်သည်
တကယ်တော့အပြင် ImgBurn ၏အကူအညီနှင့်အတူ disk ကိုမီဒီယာမှမဆိုဒေတာရေးနိုငျသောသင်တို့သည်လည်းလွယ်ကူစွာတစ်ဦးချင်းစီစာရွက်စာတမ်းများထောက်ခံမှုဖို့ disk ကိုသို့မဟုတ်သင့်လျော်သောဖိုင်တွေနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကနေဖန်တီးမည်သည့်ပုံရိပ်ကိုမောင်းထုတ်ရန်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်တွေ, ငါတို့လက်ရှိဆောင်းပါးအတွက်နောက်ပိုင်းမှာပြောပြလိမ့်မယ်။
Image ကို Disk မှာရေးသားခြင်း
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း ImgBurn သုံးပြီး CD ကိုသို့မဟုတ် DVD ကို drive ကိုမှဒေတာတွေကိုကူးယူ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်:
program ကို run, အဲဒီနောက်မျက်နှာပြင်ရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများစာရင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သင်ကနာမည်တစ်ခုကို item ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကို button ကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ် « disc ကိုမှ Write image file ကို».
ဤသည်ကိုသင်လုပ်ငန်းစဉ်၏ parameters များကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ရှိရာလာမည့်ဧရိယာ, ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိပ်မှာလက်ဝဲဘက်မှာ, သင်ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် «ရင်းမြစ်»။ ဒီဘလောက်တွင်, သင်တစ်ဦးအဝါရောင် folder ကိုနှင့်မှန်ဘီလူး၏ပုံသဏ်ဌာနှင့်အတူ button ကို click ရပါမည်။
ဒီပြီးနောက်, မျက်နှာပြင်အရင်းအမြစ်ဖိုင်ရွေးချယ်ခြင်းများအတွက်ဝင်းဒိုးကိုပြပေးလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကျနော်တို့ပြီးတော့ကျနော်တို့ကအမည်ပေါ်တွင်ဆေးသုတ်၏တစ်ခုတည်းထိက mark, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုတွေ့ပါ, တစ်ဦးကို CD ဖို့ image ကို copy, ပြီးတော့တန်ဖိုးကို click ပြီးကတည်းက "ပွင့်လင်း" အောက်ပိုင်းဒေသတွင်။
အခုတော့ drive ကိုသို့အလွတ်မီဒီယာများထည့်ပါ။ မှတ်တမ်းတင်များအတွက်အလိုရှိသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်သင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ configurations မှတဖန်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခိုက်၌သင်တို့ကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည်ဖြစ်သောအတူ drive ကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ရိုးရိုး့ dropdown list ကနေတပ်မက်လိုချင်သောအ device ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်တဦးတည်းရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ကိရိယာများပြီးသားအလိုအလြောကျ default အနေဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည့်ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သောလျှင်, သင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်မီဒီယာစစ်ဆေးနေပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလာမယ့်မျဉ်းမှတည်ရှိပြီးသောသင့်လျော်သော check box ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ပြု « Verify »။ စမ်းသပ်မှု function ကိုသက်ဝင်အခါစစ်ဆင်ရေး၏စုစုပေါင်းအချိန်တိုးမြှင့်မည်ကိုသတိပြုပါ။
သင်တို့သည်လည်းကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏မြန်နှုန်းကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးလိုင်းများ၏ parameters တွေကိုနှင့်အတူလက်ယာဘက်အခြမ်း၌ဤလုပ်ဖို့။ ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်ရရှိနိုင်ပါသည် Modes များစာရင်းကိုနှင့်အတူ menu ကိုနှိမ့်ချတစ်စက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အလွန်အကျွံမြန်နှုန်းဖွယ်ရှိမအောင်မြင်မီးလောင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒီအပေါ်မှာ data တွေကိုမှားယွင်းစွာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်စဉ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ရေးမြန်နှုန်းလျှော့ချ, အပြန်အလှန်, မပြောင်းလဲလက်ရှိအပိုဒ်ထားခဲ့ဖို့ဖြစ်စေအကြံပြု, ဒါမှမဟုတ်။ ခွင့်ပြုချက်အမြန်နှုန်း, ဖြစ်ရပ်အများစု၌, disc ကိုပေါ်ညွှန်ပြနေသည်သို့မဟုတ်ပါကသက်ဆိုင်ရာ setting တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ပြီးတာနဲ့သင်ကအောက်ပါပုံရိပ်မှာမှတ်သားဒေသအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါသငျ့သညျအပေါငျးတို့သ parameters တွေကို, ထားကြ၏။
နောက်ထပ်တိုးတက်မှု image ကိုမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင် drive ကိုအတွက် disk ကို၏အလှည့်များ၏ထူးခြားတဲ့သံကိုနားထောင်မည်။ ဒါဟာလုံးဝလိုအပ်သောမဟုတ်လျှင်သူကကြားဖြတ်မရှိဘဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးတိုင်အောင်အစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။ ပြီးစီးရန်ခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုနောက်မျဉ်းမှမြင်နိုင်ပါသည် «အချိန်လက်ကျန်».
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ပြည့်စုံဖြစ်တဲ့အခါ, drive ကိုအလိုအလျှောက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာပြင်တွင်သင်ပိတ်ဖို့ရန်ပြန်မောင်းထုတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်သတင်းစကားကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့အဆဋ္ဌမအပိုဒ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာကတော့စစ်ဆေးမှုများ option ကို, ပါဝင်သည်သောအခါဤကိစ္စများတွင်လိုအပ်ပေသည်။ ရိုးရှင်းစွာကိုကလစ်နှိပ်ပါ « OK ကို».
ဒါဟာအလိုအလျောက် disc ကိုအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအားလုံးအချက်အလက်များ၏စိစစ်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမက်ဆေ့ခ်ျကိုစမ်းသပ်၏အောင်မြင်သောပြီးစီးပေါ်သည်အထိမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီပြတင်းပေါက်များတွင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ « OK ကို».
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်၏ပြတင်းပေါက်ပြန် redirect ပါလိမ့်မယ်။ drive ကိုအောင်မြင်စွာကျမ်းစာ၌ရေးထားခဲ့ပြီးကတည်းကဒါဟာရိုးရှင်းစွာပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီ ImgBurn တွင်, ဒီ function ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများလုပ်နေတာ, သင်အလွယ်တကူပြင်ပသိုလှောင်မှုစက်ပစ္စည်းတွင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ contents ကူးယူနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး disk ကိုပုံရိပ် Creating
အဆက်မပြတ်ဆိုစတိုးဆိုင်ကိုအသုံးပြုသူများသည်ကြောင့်ဒီ option အကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့မှအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ပုံတစ်ပုံကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤဖိုင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ ဒါကမသာအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်ကပုံမှန်အသုံးပြုသောအခါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ disk ကို wear ဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါသတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်၏ဖော်ပြချက်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
ImgBurn run လိုက်ပါ။
main menu ကိုမှာ item ကို select လုပ်ပါ « disc ကိုကနေ image file ကို Create ».
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း image ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မည်သည့်အနေဖြင့်အရင်းအမြစ်ကို select ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြတင်းပေါက်၏အပေါ်ဆုံးမှာ drive ကိုသို့နှင့်သင့်လျော်သောဆွဲ-down menu ကနေလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုထည့်သွင်းပါလိုချင်သော device ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်တဦးတည်းကားမောင်းလျှင်သင်ဘာမျှမရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာအရင်းအမြစ်အဖြစ်အလိုအလျှောက်စာရင်းပါလိမ့်မည်။
ယခုတွင်သင်သည်သစ်ကိုဖိုင်ကို save ပါလိမ့်မည်ရှိရာတည်နေရာကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက folder ကို icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ဖန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခြီးမှမျးသဖွငျ့ပွုနိုငျ «ကံကြမ္မာ».
သတ်မှတ်ထားတဲ့ဧရိယာကိုကလစ်နှိပ်ခြင်း, သင်စံကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ဝင်းဒိုးကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်ပါနှင့်စာရွက်စာတမ်းအမည်ကိုသတ်မှတ်။ ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "Save".
အဆိုပါရလာဒ်ကဒိနှင့်အတူလက်ယာဘက်အခြမ်း၌သင်တို့ကို disc ကို ပတ်သက်. ယေဘုယျအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အနည်းငယ် tabs များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာဖတ်ခြင်းအချက်အလက်များ၏အမြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်မှတဆင့်တည်ရှိနေကြသည်။ သငျသညျမပြောင်းလဲပါကစွန့်ခွာခြင်းသို့မဟုတ် disc ကိုပံ့ပိုးသောအမြန်နှုန်းကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်အထက်ပါ tabs များဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကပြတင်းပေါက်တိုးတက်မှုနှစ်ခုလိုင်းများနှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဖြည့်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သွား၏။ ဒါကြောင့်ပြီးစီးသည်အထိစောင့်ပါ။
ဒါဟာစကားလုံးပေါ်တွင်နှိပ်ပါလိုအပ်ပါသည် « OK ကို» သင် program ကိုပိတ်လိုက်နိုင်သည့်ပြီးနောက်, ဖြည့်စွက်ရန်။
ဒါကလက်ရှိ function ကို၏ဖော်ပြချက်ပြီးစီးခဲ့သည်ပြီးဆုံး။ ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျခကျြခငျြးသုံးနိုငျတဲ့စံ disk ကို image ကိုရယူပါ။ စကားမစပ်အဲဒီဖိုင်တွေ ImgBurn အသုံးပြု. မသာဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးခြားဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဤစုံလင်သောဆော့ဖ်ဝဲ, သည်။
အသေးစိတ်: တစ် disk ကို image ကိုဖန်တီးအစီအစဉ်
drive ကို image ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မဆိုမတရားဖိုင်ကိုတင်ထားရန်မလိုအပ်သည့်အခါတခါတရံထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများပေါ်ထွန်း။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အဘို့, အထူးအင်္ဂါရပ် ImgBurn ရှိသေး၏။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအလေ့အကျင့်၌ဤမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
main menu ကို, သင်မှာကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ image ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါသင့်တယ် « disc ကိုဖိုင်များကို / ဖိုလ်ဒါကိုရေးရန်».
ဒေတာမှတ်တမ်းတင်ဘို့ကိုရှေးခယျြထားတဲ့အတွက်လာမယ့်ဧရိယာကိုတစ်ဦးစာရင်းထဲတွင်ပြသပါလိမ့်မည်ကြည့်ရှုရန် window ၏ဘယ်ဖက်ခြမ်းတွင်။ စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါသူတို့ရဲ့စာရင်းထည့်သွင်းဖို့, သင်ကမှန်ဘီလူးနဲ့ဖိုင်တွဲ၏ပုံစံအတွက်ဧရိယာပေါ်တွင်ကလစ်ရပါမည်။
ပြတင်းပေါက်အလွန်စံလမ်းလှပါတယ်။ သငျသညျခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပြီးရင်, သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖိုင်တွေအပေါ်မှန်ကန်သော folder ကိုရှာတွေ့တစ်ခုတည်းကလစ် နှိပ်. လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်သူတို့ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ် "folder ကိုရွေးချ" အောက်ပိုင်းဒေသတွင်။
ထိုသို့သင်သည်လိုအပ်သောသလောက်သတင်းအချက်အလက်တွေထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဒါမှမဟုတ်အဆုံးအာကာသအထိပါပဲ။ တစ်ဂဏန်းတွက်စက်၏ပုံစံအတွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်, အမရရှိနိုင်အာကာသ၏ကျန် Explore ။ ဒါဟာတူညီတဲ့ဧရိယာ setting တွင်တည်ရှိသည်။
ထိုအခါသင်ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသီးခြား window ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်လိုအပ်သောကြောင့် "Yes" ကို.
အဆိုပါ penultimate ခြေလှမ်းမှတ်တမ်းတင်များအတွက် drive ကို select လုပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ကွက်အတွက်အထူးလိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ «ကံကြမ္မာ» နှင့် drop-down list ထဲကသင့်ရဲ့ device ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါလိုချင်သောဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်သင် drive ကိုမှအဝါရောင် folder ကိုအပေါ်မြှား button ကို click ရပါမည်။
သင်တစ်ဦးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်တိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်သတင်းအချက်အလက်များစတင်ခင်မှာ, သင်အောက်ပါမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်လိုအပ်သောကြောင့် "Yes" ကို။ ဒါကရွေးချယ်ထားသောဖိုင်တွဲထဲကအကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုအမြစ် directory ထဲတွင်တည်ရှိပြီးပါလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်။ သငျသညျဖိုလ်ဒါနဲ့ဖိုင်ပူးတွဲပါဖိုင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုထိန်းသိမ်းချင်လျှင်, သင်ရွေးချယ်သင့်တယ် "အမှတ်".
သင်တစ်ဦးအသံအတိုးအကျယ်တံဆိပ် set သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်အောက်ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့မပြောင်းလဲအဲဒီ settings တွေကိုအပေါငျးတို့သထားခဲ့ပါနဲ့ရိုးရှင်းစွာကမ္ပည်းကို click ကြောင်းအကြံပြု «ဟုတ်ကဲ့» ဆက်လက်။
နောက်ဆုံးသတိပေးချက်အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်ထားသောဒေတာဖိုင်တွဲအကြောင်းကိုယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤတွင်သူတို့ရဲ့ခြုံငုံအရွယ်အစား, ဖိုင်ကိုစနစ်နှင့်အသံအတိုးအကျယ်တံဆိပ်ကိုပြ။ အရာအားလုံးမှန်လျှင်ကလစ်နှိပ်ပါ « OK ကို» အသံဖမ်းစတင်ရန်။
မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်စတင်ယခင်က disk ကိုမှဖိုလ်ဒါနှင့်အချက်အလက်ရွေးချယ်ထားကြသည်။ ခါတိုင်းလိုကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောတိုးတက်မှုသီးခြား window တွင်ပြသပါလိမ့်မည်။
မီးလောင်အောင်မြင်လျှင်, သင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအကြောင်းကြားစာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ « OK ကို» ထိုပြတင်းပေါက်အတွင်း။
ဒီနေရာမှာတကယ်တော့, ImgBurn သုံးပြီး disk ကိုဖိုင်များကိုရေးသားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး။ ရဲ့ယခုဆော့ဖ်ဝဲ၏ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်းဆောင်တာမှပေါ်ရွှေ့ကြစို့။
ဒီ feature ကျနော်တို့အထက်ပါဆောင်းပါး၏ဒုတိယအပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့ကြသောအရာမှအလွန်ဆင်တူသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ, အခြို့ disc ကိုအပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းမပေးရုံသူတို့၏အမျိုးအပုံတစ်ပုံကိုဖန်တီးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပုံပေါ်သည်။
ပွင့်လင်း ImgBurn ။
ကနဦး Menu ထဲမှာကျနော်တို့အောက်ကပုံတွင်မှတ်ချက်ပြုသောအကြောင်းအရာသည်, select လုပ်ပါ။
အောက်ပါဝင်းဒိုးကို disk ကို (ဆောင်းပါး၏ယခင်အပိုဒ်) ဖိုင်များကိုရေးသားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့နီးပါးတူညီလှပါတယ်။ လက်ဝဲ pane ထဲကကိုရွေးချယ်ထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်တွဲများအားလုံးကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်ထိုဒေသတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးမှန်ဘီလူးနဲ့ဖိုင်တွဲထဲမှာအကျွမ်းတဝင်ခလုတ်ကိုသုံးပြီးစာတန်းများကို add နိုင်ပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးသောနေရာလွတ်တွက်ချက်, သင်ကဂဏန်းတွက်စက်၏ရုပ်ပုံနှင့်အတူခလုတ်ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အထက်ပါအတွက်အနာဂတ်သင်တို့၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံအားလုံးအသေးစိတ်မြင်ရလိမ့်မည်။
ယခင် function ကိုမတူဘဲမှာလက်ခံ drive ကိုနှင့်ဖိုင်တွဲကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးရလဒ်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ ကိုခေါ်ကာဧရိယာထဲမှာ «ကံကြမ္မာ» သင်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောလယ်ပြင်၌ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်က folder ကိုမှသူ၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအထွေထွေစနစ်က directory ကိုကနေ folder ကိုရွေးနိုင်သည်။
အားလုံးလိုအပ်သောအချက်အလက်များ၏စာရင်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကယ်ဖို့ဖိုလ်ဒါကိုရွေးပါ, သင်က start button ကိုဖန်ဆင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးဖိုင်မှတ်တမ်းဝင်းဒိုးကိုဖန်တီးခင်မှာတစ်ဦးရှေးခယျြမှုနှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကလစ် နှိပ်. "Yes" ကို ဒီ window ထဲတွင်သင် program ကိုပုံရဲ့အမြစ်မှတခါမှာအားလုံးဖိုင်တွဲများရဲ့ contents ရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ကျနော်တို့ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင် "အမှတ်"ထိုအခါဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဖိုင်တွေ၏အဆင့်ဆင့်အပြည့်အဝရင်းမြစ်၌ရှိသကဲ့သို့, ထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်။
Next ကို, သင်အသံအတိုးအကျယ်တံဆိပ်ကိုပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ပစ္စည်းများကိုမထိဖို့မအကြံပေးရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါကဒီမှာစာရင်း «ဟုတ်ကဲ့».
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်တစ်ဦးကိုသီးခြားပြတင်းပေါက်၌မှတ်တမ်းတင်ထားသောဖိုင်များကို ပတ်သက်. အခြေခံအချက်အလက်ကိုမြင်လိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးပုံရိပ်ကိုဖန်တီး အကယ်. သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေပါဘူး, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ « OK ကို».
ပုံရဲ့ဖန်တီးမှုကိုသင်ကဆက်ပြောသည်င့်မည်မျှဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်းပြည့်စုံသောအခါ, တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုအတိအကျယခင် function ကို ImgBurn ၌ရှိသကဲ့သို့, စစ်ဆင်ရေး၏အောင်မြင်သောပြီးစီးအပေါ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ထိုး « OK ကို» ဖြည့်စွက်ရန်ဤပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
ဒါကအားလုံးပါပဲ။ သင့်ရဲ့ image ကိုအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့သောအရပ်ဌာန၌ created နှင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ function ကို၏ဤဖော်ပြချက်တစ်ခုအဆုံးသို့ရောက်ကြ၏။
သင်တစ်ဦး rewritable မီဒီယာ (CD-RW သို့မဟုတ် DVD-RW) ရှိပါကလုပ်ပြီးဖော်ပြထားအသုံးဝင်သော function ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုကြောင့်ထိုကဲ့သို့သယ်ဆောင်ရာမှမရရှိနိုင်ပါအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သင် drive ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အဘယ်သူမျှမကသီးခြား ImgBurn ခလုတ်ကိုလည်းမရှိ။ ဒါကတိကျတဲ့လမ်းအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
start menu ကနေ ImgBurn, အ panel ကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများမှတ်တမ်းတင်ရန်သင့်အား redirect တံ့သောအကြောင်းအရာသည်, select လုပ်ပါ။
ကျနော်တို့ optical drive ကိုသန့်ရှင်းရေးခလုတ်ကိုအလွန်သေးငယ်သည်နှင့်ဒီ window ထဲမှာဝှက်ထားလျက်ရှိ၏လိုအပ်ပါတယ်။ အနီးအနားတစ်ခဲဖျက်နဲ့ disk ကို၏ပုံစံအတွက်သောတဦးတည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ရလဒ်အနေနဲ့သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်အလယ်၌ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းရေး mode ကို select လုပ်ပါမှဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကသင်ချောင်းကိုကို format အခါ system ကိုကမ်းလှမ်းသောသူတို့နှင့်ဆင်တူကြသည်။ သငျသညျကိုနှိပ်လိုလျှင် «လျင်မြန်စွာ»ယင်းမျက်နှာပြင်၏သန့်ရှင်းရေးကိုလျင်မြန်စွာရာအရပ်ကိုယူပေမယ့်ပါလိမ့်မယ်။ ခလုတ်တစ်ခု၏အမှု၌ «အပြည့်အဝ» အရာအားလုံးအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည် - အချိန်ကိုအများကြီးကြာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သန့်ရှင်းရေးအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်လုပ်ချင်တဲ့ mode ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်, သင့်လျော်သောဧရိယာပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက်ထပ် drive ကို drive ကိုအတွက်လှည့်မှစတင်နားထောင်ကြလော့။ အဆိုပါအကျိုးစီးပွားပြတင်းပေါက်၏အောက်ပိုင်းလက်ဝဲထောင့်ပြသပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာတိုးတက်မှုသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။
မီဒီယာကနေသတင်းအချက်အလက်လုံးဝဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ, တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကို box ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီသောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဤဝင်းဒိုးကိုပိတ်လိုက် « OK ကို».
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ drive ကိုအချည်းနှီးနှင့်အသစ်ဒေတာအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကျနော်တို့ကိုယနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ထားတဲ့ ImgBurn ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ၏နောက်ဆုံးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ပညာရှိဖြစ်နှင့်တာဝန်ပြီးမြောက်ရန်သိပ်အခက်အခဲမရှိဘဲကူညီပေးပါမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ Boot တက် drive ထဲမှတစ်ဦး bootable USB drive ကဖန်တီးရန်လိုအပ်လျှင်, ကြှနျုပျတို့သညျဤအမှု၌ကူညီကြမည်ဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးခြားဆောင်းပါးဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။
Read more: က boot drive ထဲမှတစ်ဦး bootable USB drive က Make